Dark Hole – Gold Channel Movies
Apr. 30, 2021 OCN
Episode2May. 01, 2021
Episode6May. 15, 2021
Episode9May. 28, 2021
Episode 11 Jun. 04, 2021
Episode 12 Jun. 05, 2021
Dark Hole 2021(다크홀)
ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးဖို့အလှည့်ကျတာကတော့ OCNရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မယ့် Dark Hole 다크홀 ဆိုတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှု့ရမယ့် ဇွန်ဘီဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တောထဲက တွင်းပေါက်ကြီးကနေထွက်လာတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အနက်ရောင်မီးခိုးတွေကို လူတွေရှုမိရာက သန္ဓေပြောင်းသတ္တဝါ ဇွန်ဘီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားရုန်းကန်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ လူတစ်စုအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Lee Hwa Sun ကတော့ ဆိုးလ်မြို့နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနက စုံထောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ယောကျ်ားကိုသတ်တဲ့ လူသတ်သမားဆီကနေ မူဂျီရှီမြို့ကို လာဖို့ ဖုန်းအခေါ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သူမဘဝဟာ ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်သလိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မူဂျီရှီကလူတွေကတော့ တွင်းပေါက်ကြီးထဲက အနက်ရောင်မီးခိုးတွေကို ရှုမိပြီး ဇွန်ဘီတွေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ ဇွန်ဘီတွေကြားမှာ ရှင်သန်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ သူမရဲ့ ယောကျ်ားကိုသတ်တဲ့ လူသတ်သမားကို ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မူဂျီရှီမြို့ရဲ့ မြို့ခံလူဖြစ်တဲ့ Yoo Tae Han ကတော့ ကားပြင်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူဟာ လွှတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေတတ်တဲ့အပြင် တရားမျှတမှုကို အလေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ တစ်ချိန်က အထင်လွဲမှားမှုတစ်ခုကြောင့် ရဲအရာရှိဘဝကနေ အလုပ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် သူ့အလုပ်ကို အမြဲဂုဏ်ယူနေတတ်တဲ့ သူပါ။
သူဟာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာLee Hwa Sunနဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီး သူတို့၂ယောက် ဇွန်ဘီတွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေ တခြားသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရင်း ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားကြမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည့်ရှု့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း၁၂ပိုင်းပါဝင်ပြီး အပတ်စဉ် သောကြာနဲ့စနေနေ့ညတွေမှာ ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ GC Teamနဲ့အတူတူ ခံစားကြည့်ရှု့ပေးပါဦးနော်။
Translated by Thae and Snowflake
ဦးညီMay 15, 2021Reply
Invincible ဇာတ်လမ်းတွဲလေး တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ
HarryKimMay 1, 2021Reply
2011ကစထွက်တဲ့ One Upon A Timeလေး ကို S1ကနေ စပီး တင်ပေးပါအုံးဗျို့